china gearbox china, china backlow china manufacturer
U k u s h u s i n i w a i w i S i w o n i w u L t d.
Ucingo: + 86-571-88220652 / 53 Ifeksi: + 86-571-88220651 I-imeyili: [i-imeyili ivikelwe]
Ukubuyisela emuva okuphansi kwe-angle servo worm reducer ephansi
ukucacisa okuphezulu kwamagiya wesibungu kuyindawo efanelekile yokufaka u-gearbox oyiplanethi onembile, umenzi wemishini anganciphisa kakhulu izindleko zokusebenzisa ngokunembile u-gearbox wamaplanethi
Isixazululo esifanelekile somklami ukujikeleza ama-degree angama-90 ukufaka amasistimu we-servo motor drive
I-Worm shaft ochungechungeni ingaqhutshwa yimoto eyodwa ukufeza ukukhishwa okuvumelanayo kwamasondo amaningi wesibungu. Isetshenzisiwe ekupholiseni okuzenzakalelayo igobolondo leselula nezinye izinto zokusebenza
Amayunithi egiya le-Servo worm anezinhlobo ezintathu: 45 - 50 - 55 - 63 - 75 - 90, ene-lead lead worm drive.Left kanye nohlangothi lwesokudla lwesibungu kusetshenziswa i-engeli eholayo ehlukile, okwenza ukujiya kwamazinyo kushintshe kancane kancane, shaft bese ulungisa ukubuyela emuva.
Izici zokubuyela emuva okuphansi:
- Ukuhlehlela emuva kwe-Worm gear gyration kungashintshwa kube ngaphansi kwe-1 arc.
- Isinciphisi singalungiswa kabusha igebe ngemuva kokusebenzisa.
- Ukufaka ngokuhlanganisa: kunokwethenjelwa ngaphandle kokubuyela emuva.
- Lokukhipha usebenzisa oyindilinga clamping indandatho couplings: okuthembekile ngaphandle ukubuyela emuva.
Ukunyakaza okuzenzakalelayo kokujikeleza
- Ukunciphisa umsindo nokudlidliza okubangelwa ukuguqulwa komthwalo kanye noshintsho lwamandla okusika.
- ukunciphisa umsindo nomthelela obangelwa ukuqothulwa nokuhlehliswa.
- Ngokunciphisa ukuhuzuka kwesibungu.
- Ukwandisa isivinini sokuphendula izimpethu.
Idivayisi ye-Precision Indexing
- Umshini we-CNC, umugqa womhlangano, umshini wokusika, imigqa yokudlulisela, njll.
- Inkomba yedivayisi, indlela yokufunda enembile idinga izikhathi zokuhamba ezinembile.
Izimo ezishintsha ngokushesha
- Ukunciphisa umsindo nomthelela odalwa ukushintsha kwejubane.
- Ukunciphisa ukuhuzuka kwesibungu okubangelwa izinguquko zejubane.
Ukujikeleza okuphansi Yenza ukukhetha:
Lezi zihloko ezilandelayo ziqukethe imininingwane yezinto ezibalulekile ekukhetheni nasekusetshenzisweni okulungile kwe-gearbox.
Ngemininingwane ethile kububanzi be-gearbox, bheka izahluko ezifanele.
1, Kulinganiswe ngo okukhipha torque
I-torque engadluliselwa ngokuqhubekayo ngomshini wokukhipha, ngeyunithi yegiya esebenza ngaphansi kwensiza factor fs = 1.
2, torque edingekayo
Isidingo se-torque ngokuya ngemfuno yesicelo. Kunconywa ukulingana noma ngaphansi kwe-torque Mn2 u-gearbox ongaphansi kokucwaninga ulinganiselwe.
3, torque Kubalwa
Inani le-torque yekhompiyutha elizosetshenziswa lapho kukhethwa u-gearbox. Kubalwa kubhekwa i-torque edingekayo i-Mr2 ne-service factor fs, ngokobudlelwano lapha ngemuva:
1, Kukalwe amandla okokufaka
Ipharamitha ingatholakala kumashadi wokulinganiswa kwebhokisi lamagiya futhi imele i-KW engadluliselwa ngokuphepha ku-gearbox, ngokuya ngejubane lokufaka n1 nesevisi factor fs = 1.
2, Kukalwe amandla okukhipha
Leli nani lingamandla adluliswa kokukhishwa kwe-gearbox. kungabalwa ngamafomula alandelayo:
Ukusebenza kahle yipharamitha enethonya elikhulu ekulinganisweni kwezinhlelo zokusebenza ezithile, futhi ngokuyisisekelo kuncike kokuklanywa kwe-gear pair.
Ithebula ledatha lemeshini elisekhasini 9 likhombisa ukusebenza kahle okunamandla (n1 = 1400) namanani wokusebenza we-static.
Khumbula ukuthi lawa manani atholakala kuphela ngemuva kokuthi iyunithi iqhutshwe futhi isezingeni lokushisa elisebenzayo.
1, nekghono Dynamic
Ukusebenza okunamandla ubuhlobo bamandla alethwe kushaft P2 emandleni okusetshenziswa kushaft yokufaka P1:
2, ukusebenza kahle kwe-Static
Ukusebenza kahle okutholwe ekuqaleni kuka-gearbox. Yize lokhu ngokuvamile kungeyona into ebalulekile yamagiya e-helical, kungahle kube nokugxeka lapho ukhetha ama-gearmotor worm asebenza ngaphansi komsebenzi ophakathi nendawo.
INTO YENKONZO [fs]
Isici sesevisi (fs) sincike ezimeni zokusebenza ibhokisi likamagiya libhekiswe kumapharamitha adinga ukucatshangelwa ukukhetha into eyanele kunazo zonke iseva equkethe kahle:
1. Uhlobo lomthwalo womshini osebenzayo: A - B - C
2. ubude besikhathi sokusebenza sansuku zonke: amahora / usuku (△)
3.imvamisa yokuqalisa: qala / ihora (*)
UHLOBO LOMTHWALO: A - iyunifomu, fa≤0.3
B - ukushaqeka okulingene, fa≤3
C - ukushaqeka okukhulu, fa≤10
-Je (kgm2) umzuzu we-inertia yangaphandle encishisiwe kushaft yokushayela
-Jm (kgm2) umzuzu we-inertia yemoto
--Uma fa> 10 sicela uxhumane Nesevisi Yobuchwepheshe
A Iziphakeli ze-Screw zezinto zokukhanya, amafeni, imigqa yokuhlangana, amabhande okuhambisa izinto zokukhanya, ama-mixer amancane, amalifti, imishini yokuhlanza, ukugcwalisa, imishini yokulawula.
B Amadivayisi -Winding, umshini wokuphakela umshini osebenza ngamapulangwe, amalifti wezimpahla, amabhalansi, imishini yokuxhuma, ama-mixer aphakathi, amabhande okuhambisa izinto ezisindayo, ama-winches, iminyango eshibilika, izinsimbi zomanyolo, imishini yokupakisha, abahlanganisi bakakhonkolo, izindlela ze-crane, abasiki bezinto zokugaya, imishini yokugoqa, amaphampu egiya .
C Ama-mixer wezinto ezisindayo, ishears, imishini yokunyathelisa, ama-centrifuge, izisekelo ezijikelezayo, ama-winches kanye namakheshi ezinto ezisindayo, ukugaya ama-lathes, izigayo zamatshe, amalifti ebhakede, imishini yokumba, izigaxa zesando, imishini ye-cam, imishini yokugoqa, ama-turntable, imiphongolo yokuwa, ama-vibrator, abadabuli.
ukucacisa okuphezulu kwamagiya wesibungu:
I-MESH DATA & Izikhundla Zokufaka nokusebenza
Ucingo: 0086-571-88220652 / 53 Ifeksi: 0086-571-88220651 I-imeyili: [i-imeyili ivikelwe]
Copyright 2003 HEPT Wonke amalungelo agodliwe.
Umkhiqizi we: i-gearbox yama-china ebuyela emuva ephansi ,Umkhiqizi we: i-gearbox yama-china ebuyela emuva ephansi ,isinciphisi se-china sokubuyisela emuva okuphansi , i-low backlash worm gearbox china umphakeli, i-backlash worm enciphisa i-china, i-china i-angle gearheads yangakwesokudla, i-Servo applications china Manufacturer, i-gearbox ye-servo gear ebuyela emuva, i-china Worm gear reducer,umoya compressor